Ungawakhetha kanjani ama-anti-bacteria, ukuhlanza indle nokuhlanza amagciwane ngesandla?
Naka kakhulu ukupakisha lapho uthenga i-sanitizer yesandla. Ngokuvamile, okuqukethwe utshwala kumakwa kuso. Okuhamba phambili yi-75%. Akunconyelwa ukukhetha i-90% noma i-95% yokuhlushwa kotshwala ngenxa yokuhlushwa okuphezulu kuzokwakha uhlelo ...
Umgomo wokuphuza amagciwane otshwala
Utshwala obunamandla amakhulu okungena kolwelwesi ebusweni begciwane bese bufaka ngaphakathi kwamagciwane. Ukubulala amabhaktheriya ngokuqeda amanzi emzimbeni, kujiye futhi kuchaze amaprotheni akha isisekelo sempilo yebhaktheriya. Leli gciwane lakhiwa umlingani wofuzo ...
Isifundazwe saseShanxi sizokwenyusa ngokuphelele uphethiloli we-ethanol wezimoto kusuka ngo-2020
Kubikwa ukuthi ukuze kuqhutshekwe kwenziwe ngcono ukwakheka kwamandla, kunciphise ukungcola kwezimoto, futhi kuthuthukise imvelo, kusukela kulo nyaka, isifundazwe sethu sizogqugquzela futhi sizinikele ekusetshenzisweni kukaphethiloli we-ethanol ezimotweni esifundazweni sonke ngokuya ngo .. .
INational Energy Administration iphenya ngokugqugquzela nokusetshenziswa kukaphethiloli we-ethanol wezimoto (Ephreli 10, 2019)
Ukulandela ngoFebhuwari 26, 2019, iNational Energy Administration ibambe uchungechunge ezinkampanini ze-biofuel ethanol eBeijing ukulalela imibono neziphakamiso zezinkampani; ekuqaleni kuka Mashi, uMnyango Jikelele Wezokuphathwa Kwezamandla Kazwelonke wakhipha imininingwane ...